Xisbiga AKP oo Guulo waa weyn ka Gaaray doorashadii Barlamaanka ee Turkiga – Radio Daljir
Nofeembar 2, 2015 2:51 b 0
Isniin, November 02, 2015 (Daljir) —Xisbiga haya talada Turkiga ee AKP ayaa si weyn ugu guuleystay doorashooyinkii baarlamaanka ee shalay dalkaas ka dhacday, wuxuuna xisbigu dib u helay aqlabiyaddii uu lumiyay shan bilood ka hor.
Natiijada doorashadan ayaan si rasmi ah loo shaacin doonin toddobo maalmood gudahood, balse maadaama la xisaabay ku dhawaad dhammaan codadkii laga dhiibtay doorashada, wuxuu xisbigani AKP helay ku dhawaad 55% codadkii la dhiibtay, taasoo micnaheedu yahay in xisbigu uu haatan awoodo inuu maamulo baarlamaanka dalkaas ee 550 kursi ka kooban.
Guushan ayaa xoojin doonto awooda madaxweyne, Racceb Tayyib Erdogan oo aqlabiyada uu xisbigiisa helay ku tilmaamay cod loo qaaday xasilloonida iyo farriin loo diray kooxaha kurdishka ah; taasoo ah in rabshaduhu aysan marnaba la jaan-qaadi karin dimuquraadiyadda.
Ra’iisul wasaaraha Turkiga, Ahmet Davutoglu ayaa khudbaddii lagu yaqaanay ka jeediyay xarunta xisbiga ee magaalada Ankara. Wuxuuna taageerayaasha xisbiga u sheegay in guul mac-weyn ku fadhida ay gaareen.
Magaalada dhanka bari ee dalka Turkiga ku taalla, Diyarbakir ayaa waxay ciidan booliis ah suntan dadka ilmada ka keenta ku kala cayriyeen taageerayaasha xisbiga Kurdiyiinta oo ka sheegay dibadbaxooda inay ka niyad-jabeen natiijadii kasoo baxday doorashadii dhacday.
Dibad-baxayaasha ayaa dhankooda waxay ciidanka booliiska ku tuurayeen dhagaxaan iyo baaruud, taasoo keentay inay booliisku ku jawaabaan suntan ilmada keenta, iyadoo dibad-baxayaashu ay markii dambe kala tageen.
Ugu dambeyn, mucaaradka dalka Turkiga ayaa dhankooda waxay qirteen in looga looga adkaaday doorashada, waxayna tilmaameen in xisbul-xaakimka kula xisaabtami doonaan tallaaba kasta oo uu qaado.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida_Isnin_02